फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पनि अब ‘माननीय’ » खबरहरुको एउटै केन्द्र
फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पनि अब ‘माननीय’
शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १३:१८ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुन नहुने कांग्रेसले अडान नछोडेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोज्दै विवाद समाधानको प्रयास गरेका छन्।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेपछि ‘निलम्बन’ शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा संसदको दुवै सदनमा पेश हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिले फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ गरेपछि सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने र सेवा सुविधापनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो। तर कांग्रेस र राजपाले विरोध गरेपछि सभामुखले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मस्यौदामा निलम्बन भन्ने शब्द नराखी संसदको दुवै सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेका हुन्।
बिहीबार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियामावली मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूचिमा राखिएको छ। स्रोतका अनुसार फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बनमा नपर्ने गरी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएपछि मस्यौदा बैठकमा निणयार्थ पेश गर्ने तयारी गरिएको हो।
तत्कालीन एमालेले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेपछि यो विषयमा विवाद भएको थियो।
नियावली पारित नहुँदा लामोसमयदेख संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैन। संसदीय सुनुवाई समिति नहुँदा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लामोसमयदेखि कामुको भरमा चलेको छ।
संविधानमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्न संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले नाम अनुमोदन गर्नुपर्छ। अहिले संसदीय सुनुवाई समिति नभएकाले सर्वोच्च र अख्तियार कामुको भरमा चलेको हो।
PREVIOUS POST Previous post: प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति ढिलाई,किन मागेन सर्बोच्चले कारण ?
NEXT POST Next post: पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिकाे विराेधमा नेविसंघकाे प्रदर्शन
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १३:१८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १३:१८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १३:१८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १३:१८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, जेष्ठ २५, २०७५ १३:१८